Ny kinova vaovao an'ny OpenShot 2.4.4 tonian-dahatsary tsy misy laharana dia tonga | Avy amin'ny Linux
Andro vitsy lasa izay nambara ny famoahana ny kinova vaovao an'ny OpenShot 2.4.4 tonian-dahatsary tsy mivantana izay miaraka amina fanamboarana bibikely ary manampy fanatsarana ny editor.
Ho an'ireo tsy zatra ny tonian-dahatsoratra, azoko atao aminao ny milaza fa manana interface tsara sy intuitive mpampiasa izy io ary ahafahan'ny mpampiasa vao manova horonan-tsary aza.
Ny programa dia manohana vokatra am-polony am-polony maro, mamela anao hiara-miasa amin'ny mizana môtô multitrack miaraka amin'ny fahaizana mamindra singa amin'ny totozy, mamela anao handanjalanja, handrendrika, hanambatra andian-tsarimihetsika, hiantoka fandehanana milamina avy amin'ny clip iray mankany amin'ny iray hafa, ireo faritra mihodinkodina, sns.
Azo alefa amin'ny alàlan'ny fiovana mialoha ny sary ny video. Amin'ny fampiasana ny tranomboky tetikasa FFmpeg OpenShot, dia manohana endrika horonantsary, feo ary sary marobe (ao anatin'izany ny fanampiana SVG feno).
Ny kaody tetikasa dia omena eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPLv3. Ny interface dia voasoratra amin'ny Python sy PyQt5.
1 Endri-javatra vaovao lehibe an'ny OpenShot 2.4.4
1.1 Zava-baovao hafa
2 Ahoana ny fametrahana OpenShot 2.4.4?
Endri-javatra vaovao lehibe an'ny OpenShot 2.4.4
Miaraka amin'ny famoahana ity kinova OpenShot 2.4.4 vaovao ity Widget vaovao feno habe no nampiana ao amin'ny editor amin'ny fanovana fananana, aseho amin'ny pane ankavia na ankavanana an'ny interface.
Ny widget vaovao dia ahafahanao mampiseho fampahalalana misimisy kokoa nefa tsy mila mikorisa, izay tena ilaina indrindra rehefa manitsy horonantsary na mamorona sarimiaina.
Ny fizotry ny fampidirana làlana vaovao ao amin'ny OpenShot 2.4.4 dia nohavaozina, izay nanjary haingana kokoa sy mora kokoa, anisan'izany ny fahaizana mamadika fanovana raha ilaina. Amin'ireo fifanakalozan-kevitra rehetra dia nampiana ny fisian'ny anaran'ny làlana tsy ara-dalàna.
Ho fanampin'izany omena ny fampifanarahana ireo masontsivana mba hanovana ny tahan'ny endriny.
Ny fanovana dia mamaha ireo olana izay mipoitra rehefa mifindra amin'ny tahan'ny endriny hafatoy ny fanemorana na fampiharana ny keyframe aloha loatra.
Nihatsara ny fanatanterahana ny tetiandro, ao anatin'izany ny fanodinana manokana karazana rakitra audio ho an'ny horonan-tsary misy endriny tokana, fanavaozana ny zoro zoro, fanatsarana ny fahombiazany, fanatsarana ny cache amin'ny sary, ary fanesorana ireo mihantona rehefa milatsaka ireo zana-kazo.
Ny fahaizana mampifandray ireo preset fanondranana noforonin'ny mpampiasa dia nampiana. Ny rakitra misy preset dia azo apetraka ao amin'ny lahatahiry .openshot_qt / presets ary avy eo natao azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny dinika "Export".
Ny zava-baovao iray hafa dia izany nanampy fanohanana famintinana horonan-tsary dingana iray amin'ny maody CRF (Constant Rate Factor), izay azo ampiasaina amin'ny preset fanondranana rehetra ary ampiasain'ny default amin'ny preset ho an'ny endrika VP9.
Farany, amin'ireo fanovana hafa mety ho hitantsika amin'ity famoahana vaovao an'ny editor ity dia izao manaraka izao no hitantsika:
Ankehitriny ao amin'ny OpenShot 2.4.4 dia tsy mampiasa afa-tsy làlan-kaleha fotsiny ny rakitra (* .osp) ankehitriny, ahafahanao mamindra arakaraka ny lahatahiry ny tetikasa amin'ireo rafitra hafa.
Rehefa mitahiry tetikasa ianao, ny làlana ankehitriny dia avadika ho lalana tsy miovaova, anisan'izany ny fidirana ao amin'ny tantaran'ny fanovana.
Fanatsarana ny fanolorana sary SVG amin'ny alàlan'ny tranomboky resvg handikana.
Fanatsarana Windows Installer, izay mamaha ny olana mifandraika amin'ny DLL mifanipaka.
Nampidirina menio fanampiana-> Momba ny OpenShot-> Changelog miaraka amin'ny lisitry ny fanovana.
Ahoana ny fametrahana OpenShot 2.4.4?
Para mpampiasa izay liana amin'ny fametrahana ity kinova fanovana vaovao ity tokony ho fantatr'izy ireo izany ireo izay mampiasa fonosana ubuntu misy ny kinova OpenShot farany azo alaina avy ao amin'ny PPA.
Ity dia ampiana avy amin'ny terminal misy:
Ary apetrak'izy ireo amin'ny:
Ho an'ny fizarana hafa, ny editor dia azo alaina amina fizarana mizaka tena amin'ny endrika AppImage.
Ity dia alaina avy amin'ny terminal miaraka amin'ny:
Manome alalana amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny:
Ary mihazakazaka miaraka amin'ny:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Tonga ny kinova vaovao an'ny OpenShot 2.4.4 mpamoaka horonantsary tsy mivantana
EPIC Games dia mampahafantatra an'i Chaos ireo motera fizika avo lenta sy motera fanimbana azy